सुन्दरहरैंचाका प्रजातन्त्र सेनानीको स्मरण, ‘त्यो बेला काँचो मुलुक थियो’ (प्रजातन्त्र दिवस विशेष) - निष्पक्षखबर
खेमचन्द्र अधिकारी र कृष्णचन्द्र सुवेदी
विराटचोकः भोजपुर जिल्लामा जन्मिएर हाल मोरङको सुन्दरहरैंचामा बसोबास गर्दै आउनुभएका टीकाराम घिमिरेले २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन गरेको योगदानको अनुभव समेटेर प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारी निष्पक्ष खबरले तयार पारेको रिपोर्टः
उहाँको घरमा हामी पुग्दा उहाँ आफ्नो खाटमा निदाइरहनुभएको थियो । नातिनी बुहारी रुपा फुयल घिमिरेले उठाएपछि ५ मिनेट उहाँसँग सामान्य गफ गरी हामी ००७ सालको क्रान्तिको सेरोफेरोमा रहेर प्रश्न गर्न थाल्यौँ । यसबीचमा उहाँले चस्मा नलगाई ३ मिनेटजति मनमनै गीता पाठ गर्नुभयो । २००७ साल र राणाको कुरा गरेपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘राणा खेदेपछि धेरै सुखका दिन आए ।’
वि. सं. १९७४ पुसमा भोजपुरमा जन्मनुभएको उहाँ २०२८ सालमा तराई झर्नुभयो । तराई झरेपछि हात्ती र बाघसँग समेत लडाइँ गरेको सुनाउनुभएका उहाँले राणासँग भएको लडाइँको थोरै कुरा सुनाउनुभयो । स्मरणशक्ति कमजोर भएकाले सबै कुरा सुनाउन सक्नुभएन । त्यसबेलाको भोगाइ सामान्य सम्पादनसहित उहाँकै शब्दमाः
‘भोजपुरको माथिमाथि सैलुङ्गे, कपासे लेकमा राणाको विरुद्धमा काम गथ्यौंँ । राणासँगै किरातीको पनि राज थियो । मानबहादुर किरातीसँग बन्दुक थियो । हामी भने खुकुरी बोकेर हिँड्थ्यौँ । राणाले धेरै दुःख दिएका थिए । सुवर्ण समसेर भन्ने राणाले भोजपुरमा पनि दुःख दिएको थियो । राणा हटाएपछि पान सरकार (पाँच सरकार\_ श्री ५ सरकार) आयो र केही सुख पाइयो । हामी राणाविरुद्ध लड्दा पान सरकार (श्री ५ त्रिभुवन) डिल्ली (भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली) मा बसेको थियो । किरातीहरुले गोठमा बसेर डङडङ बन्दुक हान्थे । हामी कोही नपुग्ने माथि डाँडामा खटिएका थियाँै । राणाको सरकार हटाउन १०\_१२ महिना लडाइँ गर्नुपरेको थियो ।
राजाको शासन आएपछि लडाइँमा खटिनेले बक्सिस पाएको थाहा भएन, बिर्सिएँ । राणालाई पस्न नदिन माथिमाथि ओढारमा बसेर डिप्टी गरेको (काम गरेको) थिएँ । किरातीको गोठमा बसेर डिप्टी गरेको र डङडङ बन्दुक हानेको अहिले झैँ लाग्ने गरेको छ ।
जसलाई पायो उसलाई कुट्ने, मार्ने काँचो मुलुक थियो त्यो बेला । राणा हटेपछि भने त्यो अलि मथ्थर भएको थियो । राणा नखेदेको भए धेरै अप्ठ्यारो पर्ने थियो । केके गरियो, अहिले त सबै बिर्सिएँ ।’
(प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारी २०७६ साल फागुन ७ गते प्रकाशित यो सामग्री पुनः प्रकाशन गरिएको हो । – सम्पादक)
आज पनि तोलामा १ हजार रुपैयाँ घट्यो सुुनको भाउ